မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်နဲ့ ပိုးဝတီစံ ရဲ့ အကြောင်း ဖော်ထုတ် အပြီးမှာ အချေအတင် ဖြစ်ပွားနေ – Zartiman
အေးတခုတော့မှတ်ထား..ဟန်ငြိမ်းဦးခေါင်းပေါ် မှာ အနီလည်း မရှိဘူး အစိမ်းလည်းမရှိဘူး ..။အမှန်တရားပဲ ရှိတယ် ရှင်းလား…? “ဆိုပြီး ပြန်လည် ချေပထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်တခုကျော်ရဲအောင် သူ့အမျိုးသမီး နဲ့ 2003မှာကွဲသွားတယ်ဆိုပီး အမဝန်ခံတယ်နော်…။ဘာလို့ကွဲသွားလည်းဆိုတာအမသိလား သိအောင်ရောကြိုးစားဘူးလား။
တလမှာ ၂၅ရက်လောက်ကဟိုတယ်မှာဆော်နဲ့နေပီး ငါးရက်လောက်အိမ်ပြန်အိပ်တဲ့ယောကျာ်းတယောက်ကို ဘယ်အမျိုးသမီးက သည်းခံ ပေါင်းမှာလည်း… အမပြောသလို နိုင်ငံရေးတွေပါလာမှာဆိုးလို့ဆက်မပြောတော့ဘူး..”ဟန်ငြိမ်းဦးကတော့ မင်း သမီးလေး ပိုးဝတီစံနဲ့ မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်တို့ ဇာက်လမ်းတွေ ဖွင့်ချ ထားပြီးနောက် ပိုးဝတီစံ ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို ပြန်လည် ချေပထားပါတယ်နော်။
“ဟုတ်တာပေါ့ ဟန်ငြိမ်းဦးဆိုတဲ့ကောင်လေးက အနီထောက်ခံသူတွေကိုပဲ တင်တာ. ဖိုးလပြည့်၊အေးနေဝင်း၊ အေးမြတ်သူ၊မိုးစက်ဝိုင်၊ မိုး ယံဇွန်တို့ NLDဘက်တော်သားတွေ ဘယ်တုန်းကဖြစ်သွားတာလည်း ဟင် ရှင်းပြအုံး 😂😂”လို့ ပြန်လည်ပြောထားပါတယ်။
Source : U Han , Poe Waddy San
အေးတခုတော့မှတျထား..ဟနျငွိမျးဦးခေါငျးပျေါ မှာ အနီလညျး မရှိဘူး အစိမျးလညျးမရှိဘူး ..။အမှနျတရားပဲ ရှိတယျ ရှငျးလား…? “ဆိုပွီး ပွနျလညျ ခပြေထားတာတှရေ့ပါတယျ။ နောကျတခုကြျောရဲအောငျ သူ့အမြိုးသမီး နဲ့ 2003မှာကှဲသှားတယျဆိုပီး အမဝနျခံတယျနျော…။ဘာလို့ကှဲသှားလညျးဆိုတာအမသိလား သိအောငျရောကွိုးစားဘူးလား။
တလမှာ ၂၅ရကျလောကျကဟိုတယျမှာဆျောနဲ့နပေီး ငါးရကျလောကျအိမျပွနျအိပျတဲ့ယောကျြားတယောကျကို ဘယျအမြိုးသမီးက သညျးခံ ပေါငျးမှာလညျး… အမပွောသလို နိုငျငံရေးတှပေါလာမှာဆိုးလို့ဆကျမပွောတော့ဘူး..”ဟနျငွိမျးဦးကတော့ မငျး သမီးလေး ပိုးဝတီစံနဲ့ မငျးသားကွီး ကြျောရဲအောငျတို့ ဇာကျလမျးတှေ ဖှငျ့ခြ ထားပွီးနောကျ ပိုးဝတီစံ ရဲ့ တုနျ့ပွနျမှုတှကေို ပွနျလညျ ခပြေထားပါတယျနျော။
“ဟုတျတာပေါ့ ဟနျငွိမျးဦးဆိုတဲ့ကောငျလေးက အနီထောကျခံသူတှကေိုပဲ တငျတာ. ဖိုးလပွညျ့၊အေးနဝေငျး၊ အေးမွတျသူ၊မိုးစကျဝိုငျ၊ မိုး ယံဇှနျတို့ NLDဘကျတျောသားတှေ ဘယျတုနျးကဖွဈသှားတာလညျး ဟငျ ရှငျးပွအုံး 😂😂”လို့ ပွနျလညျပွောထားပါတယျ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပြင်း အထန်လုပ်နေ တဲ့ ယွန်းယွန်း ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို